May Nyane: အနှစ်နှစ်ဆယ်ဒဏ်ရာ
ညီညွတ်ခြင်းရဲ့တန်ဖိုးကို အနှစ် ၂၀ ကြာမှသိရတာတော့
ဆရာမရေ အဲဒီစာရင်းထဲမှာ ကျနော့်ကိုလည်း ထည့်ထားလိုက်ပါ
ကိုယ့်ကိုကိုယ် မလွတ်လပ်သေးဘူးဆိုတာသိရင် လွတ်လပ်ဖို့ တော်တော်နီးနေပါပြီ။ သေသေချာချာဖတ်သွားပါတယ်ဗျား။
ဆရာမ ပို့စ်လေးက ကောင်းလိုက်တာ။
ချိုသင်းတို့ အုတ်တချပ် သဲတပွင့်တော့ အသေအချာ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အားမလျှော့ပါနဲ့။
အမှန်တရားဟာ တနေ့တော့ အနိုင်ရ ရမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ ကြာလွန်းတယ်။ အရင်းအနှီး ကြီးလွန်းတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပြိုင်တူတွန်းရင်တော့ ရွေ့  ပါတယ်။ ပြိုင်တူ တွန်းဖို့ပဲ လိုတာပါ။
ဆရာမရေ... ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်တို့စိတ်တွေရွဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုတော့သူတို့တားဆီးလို့မရသေးပါဘူး..
ကျွန်တောင်တို့ ကသူတို့တွေကို brainwash လုပ် ခွင့်မပေးသ၍တော့လွတ်လပ်နေအုံးမှာပါ...
ဆရာမရေ... ခွင့်မတောင်းဘဲဆရာမ Blog ကိုလင့်ထားတာကို တစ်ခါတည်းတောင်းပန်လိုက်ပါတယ်..
We never forget 8-8-1988 Uprising.
We salute all unsung hero who have sacrificed their lives for our non-violent struggle for human rights, democracy in Burma.
We never forget 15-8-2007 Saffron Revolution.
We salute all unsung monks, people who have sacrificed their lives for our non-violent struggle for human rights, democracy in Burma.
We never forget 2-5-2008 Cyclone Nargis .
We sympathize all burmese people who lost their lives in Cyclone Nargis.
We never forget 8-8-2008 and we never giveup.
*Until now, China has no good standing human rights record. In Tiananmen Square protests and Tibet protests many civilians were killed and thousands more were injured.
*China isathreat to the world peace because China is selling to human rights abusers Like Burma and Sudan.
*The world countries are warned of food and poor quality products like deadly toothpaste imported